Medair 30 taona: nosantarina tamin’ny fanomezan-drà ny fanamarihana | NewsMada
Medair 30 taona: nosantarina tamin’ny fanomezan-drà ny fanamarihana
Feno 30 taona amin’ity taona ity ny nijoroan’ny fikambanana iraisam-pirenena Medair. Hanamarihany izany ny hetsika mahakasika mivantana ny maha olona, antsoina hoe “Fohazy ny maha olona an-tany ao amintsika”, izay tohanan’ny vondrona Deutsche Post DHL. Tanjona ny hampahafantatra ny tsirairay ireo olana goavana mahakasika ny maha olona eto Madagasikara, ny hanaitra ny saina ny amin’ny andraikitry ny tsirairay amin’ny fanavotana aina, ny hampahalala ireo asa mahakasika mivantana ny mponina sy ireo rafitra manohana izany eto amintsika ary ny fanangonam-bola ho fanohizan’ny fikambanana ireo asa sahaniny hatramin’izay.
Nisantarana ity hetsika ity àry, omaly tetsy amin’ny HJRA, ny fanomezan-dra nataon’ireo mpitarika ny fikambanana sy ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombon’antoka aminy rehetra. Tafiditra ihany koa ao anatin’ny fanamarihana ny Andro eran-tany ho an’ny fanomezan-dra, marihina isaky ny 14 jona, ity natao omaly ity. Mizotra mankany amin’ny tanjon’ny hetsika ity fanomezan-dra ity, satria, fotoana kely monja no takina amin’ny mpanome ra kanefa mahavonjy aina izany.
Aorian’izao, handray anjara amin’ny Andro eran-tany ho an’ny fanampiana ny maha olona, ny Andro eran-tany ho an’ny fisorohana ny loza voajanahary, ny Andro eran-tany ho an’ny mpilatsaka an-tsitrapo ary ny Andro eran-tany ho an’ny firaisankinan’ny olombelona ihany koa ny Medair.